IBafana Bafana iyahluleka ukungena emqhudelwaneni we-AFCON | Scrolla Izindaba
IBafana Bafana iyahluleka ukungena emqhudelwaneni we-AFCON
Ukudabuka kwenhliziyo esizweni saseNingizimu Afrika njengoba iqembu labo lesizwe lehluleka ukuhlungela I-African Cup of Nations okokuqala ngqa kusukela ngowezi-2017.
UMolefi Ntseki nabafana bakhe bebedinga nje ukugwema ukwehlulwa kuphela ukuze bakwazi ukungena umqhudelwano ohlonishwa kakhulu e-Afrika. Kodwa ukuhlulwa ngo-2-0 bedlala ne-Sudan kuthumele abadlali baseNingizimu Afrika ekhaya.
Amagoli kaSaifeldin Bakhit noMohammed Abdel-Rahman abenele ukunika iNingizimu Afrika ukuhlulwa okuthusayo.
IBafana Bafana ibibukeka isesimeni esihle ngemuva kosuku lomdlalo wesine ku-Group C, ngemuva kokunqoba imidlalo emithathu kwemine.
Ukunqoba kwabo kabili emidlalweni yabo emibili edlule bekuzokwenza ukuthi izwe lilungele imiqhudelwano eyichungechunge ye-AFCON, kodwa ukudlala ngokulingana ne-Ghana nokuhlulwa yi-Sudan kusho ukuthi iNingizimu Afrika izodumala ngokungafaneleki ukungena kulo mqhudelwano.
INingizimu Afrika, ekleliswe endaweni ye-13 ohlwini lwamazwe ase-Afrika, ibe yizintandokazi ngokushaya iSudan ngosuku lokugcina lomdlalo, uma kubhekwa izimbangi zayo ebusuku zikleliswe endaweni yama-34.
Uma sibheka phambili, umqeqeshi omkhulu uNtseki uzoba enkingeni ngokwehluleka ukufaka iqembu lakhe ku-Afcon. UNtseki othathe izintambo kuStuart Baxter ngowezi-2019 usephathe iBafana Bafana amahlandla ayisishiyagalolunye, wanqoba imidlalo emine kuphela wahlulwa kwemithathu wakudlala ngokulingana kwemibili. Okudumaza kakhulu ngalo mqeqeshi ukuthi iqembu lakhe selingenelwe ngamagoli ayi-11 esewonke emidlalweni yakhe eyisishiyagalolunye ephethe.
Isizwe sonke sizoba nenhliziyo ebuhlungu futhi sidumala ngokuthi izwe angeke livele emncintiswaneni abagcina ukuwunqoba ngowezi-1996.
Umthombo wesithombe: @BafanaBafana